विभागको जनशक्ति र पूर्वाधारले बजार नियमन गर्न कठिन छ «
विभागको जनशक्ति र पूर्वाधारले बजार नियमन गर्न कठिन छ
कतिपय वस्तुमा नियतवश पनि कैफियत भएको देखिन्छ । बोर्डरमा आएका केसहरू अलि कन्फ्युजन किसिमका हुन्छन् । आयातमा तोकिएको मापदण्डभन्दा बढी देखियो भने त्यसको गुणस्तरमा गडबडी गरेको छ भन्ने देखिन्छ ।
ट्याक्सीमा मुख्य समस्या भनेको मिटरमा नजाने हो, जसलाई सम्बोधन गर्नका लागि कानुन संशोधनको क्रममा रहेका छौं । यदि कानुन संशोधन भएर आयो भने मिटरमा ट्याक्सीले यात्रु नबोके पनि हामीले कारबाही गर्न सक्छौं ।
आयात–निर्यातका वस्तुको पनि मापदण्ड तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । हस्तकलाका सामानहरूमा समयअनुकूल मापदण्ड तयार परिमार्जन गर्ने र त्यसअनुसार बजारमा नियमन र सेवा उपलब्ध गराउने विषय चुनौती रहेको छ ।
पछिल्लो पटक मेडिकल फेस मास्क, मास्कमा गुणस्तर प्रदान गरेर इजाजत प्रदान गरेका छौं । त्यस्तै स्यानिटर प्याड व्यापक रूपमा प्रयोग गएको छ । यसमा पनि गुणस्तर प्रदान गरेका छौं । पिबिङ ब्लक, फोहोरमा ओछ्याउने ब्लकहरूमा गुणस्तर निर्धारण भइसकेपछि विभिन्न उद्योगहरूले इजाजपत्र लिइसकेका छन् ।
विभागको जनशक्ति र पूर्वाधारले बजार नियमन गर्न कठिन
नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले वस्तुको मापदण्ड निर्धारण गरी गुणस्तर चिह्न प्रदान गरेर बजारलाई नियमन गर्ने काम गर्छ । तोकिएको मापदण्ड पूरा नगरी वस्तुको उत्पादन गर्ने उद्योगलाई विभागले कारबाहीसमेत गर्ने गर्छ । औद्योगिक विकाससँगै उपभोक्ताको हितका लागि कुनै पनि पदार्थको गुणस्तर निर्धारण गर्ने र त्यस्ता पदार्थहरूमा गुणस्तर प्रमाण चिह्नहरू प्रयोग गर्ने व्यवस्था चार दशक अघिदेखि सुरु भएको हो । वस्तु वा पदार्थको गुणस्तर निर्धारण कार्य २०३४ सालमा थालनी भएसँगै गुणस्तरसम्बन्धी क्रियाकलापहरूमा वैज्ञानिक, औद्योगिक र कानुनी नापतौलको पनि भूमिका रहने हुँदा यसलाई अझ बढी सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन नापतौल विभागलाई पनि गुणस्तर कार्यालयसँगै गाभेर २०४४ सालमा नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग स्थापना गरियो ।
विभागले विभिन्न वस्तु तथा सेवाको मापदण्ड तयार गरी गुणस्तर चिह्न प्रदान गर्दै आएको छ । विश्व बजारमा उत्पादन भइरहने नयाँ–नयाँ वस्तु तथा ती वस्तुहरूको मापदण्ड तयार गरी गुणस्तर निर्धारण गर्ने विभागको मुख्य जिम्मेवारी रहेको छ । आम उपभोक्ताको स्वास्थ्य र सुरक्षासँग जोडिएको उपभोग्य वस्तुहरूको गुणस्तर कायम गर्न विभागले के–कस्ता गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ ? बजारमा वस्तुको गुणस्तर र नापतौलको अवस्था के, थप नयाँ कुन–कुन वस्तुमा गुणस्तर निर्धारण गर्दै छ ? लगायतका समग्र गुणस्तर र नापतौलसँग सम्बन्धित विषयमा केन्द्रित रहेर विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीसँग कारोबारकर्मी लक्ष्मी सापकोटाले गरेको कुराकानीको सारः
बजारमा वस्तुको गुणस्तर र नापतौलको अवस्था के छ ?
विगतमा जति पनि व्यापार गुणस्तर इजाजत प्रदान गरिएका वस्तुहरू छन्, ती वस्तुहरूको नियमित रूपमा बजारमा अनुगमन गरेर नमुना परीक्षण गर्ने कार्य गरिरहेका छौं । पछिल्लो पटक दसैंअगाडि व्यापक रूपमा निर्माण सामग्रीहरूको नमुना संकलन गरेका छौं । यसको नतिजाहरू आउने क्रममा छन् । अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दाखेरि उद्योग व्यवसायीहरू जति पनि गुणस्तरीय वस्तुहरूको उपभोग गर्ने एउटा संस्कृतिको विकास भइरहेको छ, उद्योगी व्यवसायीले गुणस्तरीय वस्तुहरूको माध्यमबाट बजार प्रवद्र्धन गर्ने काम गरिरहेका छन् ।
समग्रमा भन्दाखेरि गुणस्तर चिह्न प्राप्त वस्तुहरू विश्वसनीय रहेको पाएका छौं । अहिलेसम्म ६७ प्रकारका वस्तुमा नेपाल गुणस्तर चिह्न प्रदान गरिएको छ । मुख्य गरेर निर्माणजन्य सामग्रीहरू पाइप, ट्याङ्की, सिट, जीआई पाइप, जीआई वायर, पीपीपी आइप, प्लाइउड, रेगुलेटरलगायतका अन्य वस्तुहरूमा गुणस्तर चिह्न प्रदान गरिएको छ ।
नियमित रूपमा प्रत्येक वर्ष नयाँ–नयाँ वस्तुको गुणस्तर निर्धारण गर्ने काम भएपछि त्यसमा इजाजतपत्र प्रदान गर्दै आएका छौं । पछिल्लो पटक मेडिकल फेस मास्क, मास्कमा गुणस्तर प्रदान गरेर इजाजत प्रदान गरेका छौं । त्यस्तै स्यानिटर प्याड व्यापक रूपमा प्रयोग गएको छ । यसमा पनि गुणस्तर प्रदान गरेका छौं ।
पिबिङ ब्लक, फोहोरमा ओछ्याउने ब्लकहरूमा गुणस्तर निर्धारण भइसकेपछि विभिन्न उद्योगहरूले इजाजपत्र लिइसकेका छन् । त्यस्तैगरी सडकमा प्रयोग हुने निर्माणजन्य सामग्रीहरूमा पनि गुणस्तर निर्धाण गरेका छौं । सौन्दर्य सामग्रीका वस्तुहरूमा पनि गुणस्तर निर्धाण गरेका छौं । औषधि व्यवस्था विभागभित्र यसको नियमनकारी भूमिका राखिएको कारणले गर्दा विभागले यी वस्तुहरूमा गुणस्तर निर्धारण मात्र गर्न सक्छौं । यसलाई विभागले नियमन गर्न सक्दैन ।
बजारमा निर्माण सामग्रीहरू छड, डन्डी, सिमेन्टको गुणस्तरमा बढी समस्या देखिने गरेको छ । कारबाही गरिए पनि पुनः समस्या दोहोरिने गरेको छ । किन बारम्बर गुणस्तरमा समस्या देखिने गर्छ ?
प्रत्येक वर्ष ४ सय वस्तुमा इजाजत प्राप्त वस्तुहरूमध्ये ५ देखि १० प्रतिशतको हाराहारीमा कैफियत पाएका छौं । यी कैफियतहरूमा पनि १ देखि २ प्रतिशत नियतवशभन्दा पनि नचाहेरै कतिपय वस्तुमा समस्या देखिएको हुन सक्छ । तर, कतिपय वस्तुमा नियतवश पनि कैफियत भएको देखिन्छ । बोर्डरमा आएका केसहरू अलि कन्फ्युजन किसिमका हुन्छन् । आयातमा तोकिएको मापदण्डभन्दा बढी देखियो भने त्यसको गुणस्तरमा गडबडी गरेको छ भन्ने देखिन्छ । पछिल्लो समय नियतवश गर्ने कैफियतहरूमा सुधार आएको छ ।
तर पनि हामीलाई परेको कठिनाइ के हो भने बजारमा नियमनको दायरा हेर्नुपर्ने उद्योगहरूको दायरा धेरै नै बढेको छ । विभागमा रहेको कम जनशक्ति र कम पूर्वाधारका कारणले गर्दा धेरै नै कठिन परेको छ । विगतमा चार–पाँचवटा सिमेन्ट उद्योग हुँदाको बेलाको यही जनशक्तिले अहिले ६५ वटा सिमेन्ट उद्योग धानिरहेका छन् । ३० वटा डन्डी उद्योग र ४० भन्दा बढी एजडीपी पाइप उद्योगहरू रहेका छन् । पछिल्लो समय उद्योगको संख्या दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ, तर विभागमा जनशक्ति एकदम न्यून छ ।
जसको कारणले गर्दा पनि बजारमा नियमन गर्न हामीलाई धेरै समस्या परेको छ । सबै उद्योगमा जुन संख्यामा नमुना परीक्षण गर्नुपर्ने हो, त्यसमा सीमितता भएको छ । प्रत्येक वर्ष ४ सयवटा मात्र सिमेन्टको नमुना परीक्षण गर्न सक्छौं । यो भनेको एकदम न्यून हो । कम्तीमा वार्षिक रूपमा १ हजारको संख्यामा सिमेन्टमा नमुना परीक्षण गर्ने क्षमता राख्नुपर्छ ।
वस्तुको गुणस्तरलाई कसरी हेर्ने र कसरी बजार हस्तक्षेप गर्ने भन्ने एकदम जटिलता रहेको छ । बजारमा कुनै पनि किसिमको गुणस्तरमा हुन सक्ने इनकन्स्टेन्सीका लागि उद्योग, बजार नमुना संकलन कम भएकाले बढाउनुपर्ने जरुरी छ । कतिपय अवस्थामा यी कुराहरू ओझेलमा पर्ने समस्याहरू पनि बढिरहेका छन् । आगामी दिनमा विभागलाई कानुन कार्यान्वयनमा अत्यन्त कठिनाइ भोग्नुपरेको छ । यसमा समयमा विभागको पूर्वाधार र जनशक्ति व्यवस्थापन भएन भने काम गर्न धेरै नै समस्या हुन्छ ।
वस्तुको गुणस्तरमा समस्या भएको उपभोक्ताको गुनासो छ नि ?
गुणस्तरको माध्यमबाट विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ भनेर उद्योगी–व्यवसायीहरूले धेरै नै मेहनत गरेका छन् । तर पनि अस्वस्थ रूपमा कहिलेकाहीं धेरै ठूलो उद्योगहरूको बीचमा मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि गुणस्तरमा कमी–कमजोरी गरेको भेटिएको छ । यसले गर्दा पनि हामीलाई जटिलता थपिएको हो । अनुगमनका क्रममा कतिपय उद्योगले गुणस्तरमा तलमाथि गरेको पनि पाएको छ । गुणस्तरमा ध्यान नदिने उद्योगलाई कारबाही गर्ने भनेर दसैं अगाडि मात्र ४० वटा नमुना संकलन गरेका छौं । प्रत्येक महिनामा डन्डी, सिमेन्टलगायतका वस्तुहरूको नमुना संकलन गरेर परीक्षण गर्छाैं । विभागले गर्दै आएको सर्भिलेन्सलाई कडाइ गरेर लैजान्छौं । गुणस्तरका विषयमा उद्योगले कहींकतै कमजोरी गरेको छ भने सार्वजनिक रूपमा बाहिर ल्याउने गर्छौं । यसले गर्दा बजार सुधार होस् भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले काम गरिरहेका छौं ।
गुणस्तरयुक्त वस्तु छ÷छैन भनेर उपभोक्ताले कसरी जानकारी पाउने ?
गुणस्तरीय डन्डी नभएको अवस्थामा बेन्डिङ, रिबेन्डिङ गर्दा क्र्याक हुने गर्छ । डन्डीमा क्र्याक छ कि छैन भनेर हेरियो भने पनि हामीले थाहा पाउन सक्छौं । सिमेन्टको हकमा विशेष गरेर यसको गुणस्तर छ कि छैन भनेर आफैं पनि मूल्याङ्कन गर्न सक्छौं । सिमेन्ट प्रयोग गरिसकेपछि त्यसको कडापन हुन्छ भनेर हेर्न सकिन्छ । घरमा प्रयोग गरिएको सिमेन्टको गुणस्तर मापदण्डअनुरूप छ कि छैन भनेर पनि हामीले थाहा पाउन सक्छौं । गहन रूपमा गुणस्तर हेर्नका लागि त नमुना परीक्षण गर्नुपर्छ । हाउस वेयरिङ तारको गुणस्तर पनि हेर्न सकिन्छ । अर्काे उस्तै तारको मोटाइपनमा कि छ कि भनेर थाहा पाउन सकिन्छ ।
पेट्रोलियम पदार्थको गुणस्तर र नापतौलको अवस्था के छ ?
पेट्रोल, डिजेलको गुणस्तरमा कहिलेकाहीं गुनासा र उजुरीहरू आउने गरेको देखिन्छ । पम्पले लामो समयसम्म सफाइ नगर्दा समस्या आउने गरेको देखिन्छ । मिसावटको हकमा एकदमै नगन्य मात्रामा रहेको छ । डिजेल र मटीतेलको मूल्य एउटै भइसकेपछि मिसावटको मात्र ह्वात्तै घटेको छ । हवाई इन्धन चोरी भयो भने फेरि डिजेलमा लगेर मिसावट हुन सक्छ, तर अहिले त्यसको मात्रा एकदम कम छ । इन्धनको नापतौलमा धेरै नै कडाइ गरेका छौं । पम्पले परिमाणमा तलमाथि गर्नासाथ अदालतमा मुद्दा दायर गर्छौं ।
गलत उद्देश्यले इन्धन भर्दा उपभोक्तालाई कम परिमाण दिने कहींकतै पाइए पनि समग्रमा अहिले धेरै नै सुधार आएको छ । पहिला जुन अनुपातमा परिमाणमा समस्या थियो, अहिले आएर धेरै नै कम भएको छ । आगामी दिनमा यसलाई ग्राहकको गुनासो र प्रतिक्रियालाई आधार लिएर अगाडि बढ्छौं ।
अहिले पम्पमा नयाँ प्रविधिमा आधारित डिस्पेन्स प्रयोग गरिसकेपछि चोरी हुने समस्या पनि एकदम न्यून छ । पम्पमा चोरी गरियो भने, कुनै पार्टहरू चलायो भने सबै रेकर्ड हुने प्रणाली जडान गरिएको हुन्छ । सबै हेर्न सकिने भएकाले पनि अनावश्यक रूपमा चलायो भने ती कुराहरू पछि थाहा हुन्छ । पुराना पम्पहरूमा केही समस्या छ, ती बिस्तारै फेजआउट हुँदै जान्छन् ।
ग्यास उद्योग सबैले गुणस्तर चिह्न लिइसकेका छन् ? उद्योगमा पनि बेलाबेला दुर्घटना हुने हुन्छ, किन ?
थोरै ग्यास उद्योगहरूले गुणस्तर चिह्न लिन बाँकी रहेको छ । अहिलेसम्म विभागबाट ५० वटा ग्यास उद्योगले गुणस्तर चिह्न लिएको र १० वटाले लिन बाँकी छ । केही उद्योगहरूले पूर्वाधारका कारणले गर्दा ढिलाइ भएको छ ।
ग्यासमा धेरै कारणले गर्दा दुर्घटना हुने गर्छ । ग्यास उच्च जोखिमयुक्त प्रज्वलनशील वस्तु रहेकाले पनि यसमा उपभोक्ता सचेत हुन अति आवश्यक हुन्छ । यसमा जनचेतना सबैभन्दा कमी रहेको छ । बोटलिङ प्लान्टले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी भनेको सुरक्षित सिलिन्डरमा ग्यास भर्ने हो । त्यसमा लिकेज, परिमाण सुनिश्चित गरेर मात्र उपभोक्तामा पठाउनुपर्ने उद्योगीको दायित्व छ । पूर्वाधारको कमीले गर्दा कतिपय उद्योगमा समस्या छ । ग्यासको डिप परीक्षण भल्ब परीक्षण पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा कमजोरी भएको देखिन्छ ।
ग्यासमा बढी लिक भए कतिपय अवस्थामा छुटाउन नसकेको अवस्था पनि छ । बोटलिङ प्लान्टले अझै सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । प्लान्टबाट ग्यास गइसकेपछि उपभोक्तासमक्ष पुगेपछि पनि सजक र सतर्क हुनुपर्छ । सिलिन्डरमा रेगुलेटर, पाइप फिट गर्छौं । प्रत्येक चरणमा हुने जोखिमलाई विश्लेषण गर्नुपर्छ । रेगुलेटर लगाइसकेपछि ग्यास लिक छ कि छैन, पाइप फिट छ कि छैन भनेर पनि हेर्नुपर्छ । अहिले रेगुलेटरमा रबर होज पाइप अनिवार्य गरेका छौं । यी पाइपहरूमात्र प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।
कतिपय अवस्थामा यस्ता पाइपहरू प्रयोग नगरिए चिसो तातोले पनि आफ्नो स्थान छोड्दा ग्यास लिक भएर दुघर्टना हुने भइरहेको छ । त्यसले गर्दा हामीले उपभोक्ता तहमा सचेतना के चाहिन्छ भनेर हरेक समय ग्यासबाट हुने दर्घटनाबाट जोगिनका लागि ग्यास लिक छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्छ ।
ग्यास बाल्नुभन्दा पहिला ग्यास लिक भएको छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्छ । लिक भएको छ भनेर सुरक्षित रूपमा रेगुलेटर बन्द गरेर बाहिर राखियो भने केही पनि फरक पर्दैन । तर, लिकेज भइरहेको अवस्थामा ग्यास बालियो भने आगलागी भएर दुर्घटना हुने हुन्छ । समग्रा भन्दा पहिलाभन्दा अहिले केही सुधार भएको छ । तर, आगामी दिनमा ग्यासबाट हुने दुर्घटनाबाट जोगिनका लागि प्रत्येक तहमा होसियार हुनुपर्छ । भल्ब, पाइप, रेगुलेटर जहाँबाट पनि ग्यास लिक हुन सक्छ । लिक भइरहेको छ/छैन भनेर बर्नरबाट ग्यास चलायो भने समस्या हुँदैन, तर ती कुरामा त्यति ध्यान दिएनौं भने जोखिम हुन सक्छ ।
ट्याक्सीले बढी शुल्क लिने, मिटरमा नगएर यात्रुलाई ठग्ने गरेको गुनासो छ, यसलाई कसरी नियमन गर्नुभएको छ ?
ट्याक्सीमा मुख्य समस्या भनेको मिटरमा नजाने हो, जसलाई सम्बोधन गर्नका लागि कानुन संशोधनको क्रममा रहेका छौं । यदि कानुन संशोधन भएर आयो भने मिटरमा ट्याक्सीले यात्रु नबोके पनि हामीले कारबाही गर्न सक्छौं । तर विगतमा मिटर प्रयोग नगरेकोमा यातायात व्यवस्था विभागबाट ट्याक्सीलाई कारबाही भएको छ । उपत्यकामा ९ हजारको संख्यामा ट्याक्सी सञ्चालनमा छन् । केही ट्याक्सीहरूले दुई–चार वर्षदेखि नवीकरण नगराईकन यात्रुहरूलाई ठगी गरेको पाइएको छ । यस्ता ट्याक्सीहरूलाई कारबाहीका लागि अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छौं ।
ढक–तराजुमा नापतौलको कमी भएको उपभोक्ताको गुनासो छ । यसलाई कसरी नियमन गरिरहनुभएको छ ?
ढकको नापतौलमा समस्या छैन । कानुनी रूपमा खरिद गरेको ३५ दिनभित्र अनुमति लिएर व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तोकिएको समयभित्र अनुमति नलिई ढक–तराजु सञ्चालन गरे १० हजार रुपैयाँ जरिवाना र एक वर्ष कैदको व्यवस्था छ । कतिपय व्यवसायीले समयमा अनुमति नलिएर पनि ढक–तराजु सञ्चालन गरिरहेकाले कारबाही पनि गरेका छौं । अनुमति नलिए पनि तौलमा घटीबढी नगरेमा उपभोक्ता ठगी गरेको होइन । अनुमति नलिँदा कारबाही गर्ने व्यवस्था अनुचित भयो, व्यवसायीका संगठनहरूबाट माग आएको छ । यसको ऐन परिमार्जन गर्न अति जरुरी छ ।
वस्तुको गुणस्तर कायम गर्न र नापतौलमा हुने ठगी रोक्नका लागि विभागले के गर्दै छ ?
बजारमा नापतौल, गुणस्तरमा विगतमा भन्दा सुधार आएको छ । सहरी विकास विस्तार हुँदै आइसकेपछि दैनिक जनजीवनमा धेरै वस्तुहरू प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । गुणस्तरमा, नापतौलमा हुन सक्ने ठगी नियन्त्रण गर्नका लागि नियमित रूपमा अनुगमनसँगै तोकिएको मापदण्ड पूरा नगर्ने उद्योगी–व्यवसायीलाई कारबाही पनि गर्दै आएको छौं ।
यस्ता वस्तुहरूबाट आम उपभोक्ताप्रति स्वास्थ्य, सुरक्षा, वातावरणप्रति चासो हुने गर्छ । यी विषयवस्तुलाई सम्बोधन गर्नका लागि बजारमा विभागको भूमिका महŒवपूर्ण रहेको छ ।
तर, विभागमा कम जनशक्ति भएकाले नियमन गर्न धेरै नै समस्या परेको छ । किनभने बजारमा हजारौं वस्तुको नियमन, गुणस्तर कायम र प्रक्रियामा मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । निजी क्षेत्रलाई सेवा प्रदान गर्ने र बजारमा निरीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । सीमित जनशक्तिका बाबजुद पनि हामीले नयाँ–नयाँ मापदण्ड तयार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
कतिपय विद्युतीय सामान त्यत्तिकै छन् । कन्स्टक्सनको क्षेत्रका धेरै विषय छन्, साथै सेवा क्षेत्रमा पनि धेरै विषयहरू हेर्नुपर्ने छन् । सार्वजनिक सेवा, स्वास्थ्य सेवामा मापदण्ड तयार गर्न बाँकी छ । नियमन जुन निकायबाट भए पनि पहिला तिनको मापदण्ड तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । यी कामहरू अत्यावश्यकीय भइरहेको छ ।
साथै कतिपय फुड प्याकेजिङ वस्तुहरू तथा ड्राई फुडमा मापदण्ड तोक्नु जरुरी छ । आयात–निर्यातका वस्तुको पनि मापदण्ड तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । हस्तकलाका सामानहरूमा समयअनुकूल मापदण्ड तयार परिमार्जन गर्ने र त्यसअनुसार बजारमा नियमन र सेवा उपलब्ध गराउने विषय चुनौती रहेको छ । अहिले २० देखि २५ प्रतिशत मात्र सेवा उपलब्ध गराइरहेका छौं । सबै क्षेत्रमा सेवा उपलब्ध गराउन जनशक्ति अभावले सकिरहेका छैनौं ।
कुन–कुन वस्तुमा गुणस्तर निर्धारण गर्दै हुनुहुन्छ ?
मिनरल वाटर, निर्माण सामग्री, पेन्ट, ट्याङ्की, एलपीजी सिलिन्डर, विद्युतीय सामान अन्य नयाँ–नयाँ वस्तुहरूमा मापदण्ड तयार गर्दै छौं । २५ वटा वस्तुको गुणस्तर निर्धारण गर्न लागिरहेका छौं । यो वर्ष हस्तकलाका उत्पादनअन्तर्गत जेम्स ज्वेलरीमा बढी केन्द्रित भएर लागिरहेका छौं । फुटवेयर जुत्ता, अल्लोको उत्पादन, प्राकृतिक रेशाका वस्तुहरूलगायतका अन्य वस्तुमा गुणस्तर निर्धारण गर्न लागिरहेका छौं ।
सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक र होटल शाराबीच सम्झौता
१२ जेठदेखि प्लास्टिक प्रदर्शनी हुने
राजीव पौडेलद्वारा एन्फा अध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा